လေယာဉ်ပေါ်ကအိမ်သာထဲမှဆေးလိပ်ပြာခွက်များ | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Community & Society » လေယာဉ်ပေါ်ကအိမ်သာထဲမှဆေးလိပ်ပြာခွက်များ	5
Posted by Pye Kun Zaw on Jul 29, 2012 in Community & Society |5comments
ယနေ့ခေတ်လေယာဉ်တွေအားလုံးမှာ ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ကို တားမြစ်ထားပါတယ်။ လေယာဉ်တစ်ခုလုံး ဘယ်နေရာမှသောက်ခွင့်မပြုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အိမ်သာထဲမှာတော့ ဆေးလိပ်ပြာခွက်တွေ တွေ့နေရပါတယ်။ ဟိုးအရင်တုံးက ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ပြုခဲ့စဉ်အခါက ထားခဲ့တဲ့ ဆေးလိပ်ပြာခွက်တွေကို မလွင့်ပြစ်မိဘဲ ဒီအတိုင်းကျန်နေခဲ့တာလား။ ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဆောင်းပါးတစ်ခုကရေးထားပါတယ်။ အကယ်၍များ ဆေးလိပ်ပြာခွက်တွေကို အိမ်သာထဲမှမထားဘဲ လေယာဉ်ထွက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့။ တော်တော်တော့ထူးဆန်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဆေးလိပ်သောက်တာကိုဘယ်လောက်ဘဲ တားမြစ်ထားပေမယ့် ဆေးလိပ်စွဲနေသူတွေကတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ်သောက်မှာပါဘဲ။ အထူးသဖြင့်ခရီးရှည်သွားရတဲ့ လေယာဉ်တွေပေါ်မှာ တနေ့ဆေးလိပ်တစ်ဗူးနှစ်ဗူး သောက်နေကျလူက မသောက်ဘဲဘယ်နေနိုင်ပါလိမ်မလဲ။ တကယ်လို့သာ ပြာခွက်တွေ ထားမပေးထားဘူးဆိုရင် ဆေးလိပ်အကြွင်းအကျန်တွေက ဖြစ်တဲ့အန္တရယ်ကိုလှလှကြီးခံရတော့မှာပါ။ ဒါကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၇၃မှာလူပေါင်း ၁၂၃ယောက်ကိုသေစေခဲ့တဲ့ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုတစ်ခုရဲ့ တရားခံဟာ ဆေးလိပ်အကြွင်းအကျန်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြာခွက်မရှိတော့ ဒီအတိုင်းလွင့်ပစ်လိုက်ရင်း အန္တရယ်ဖြစ်စေခဲ့တာပါ။ ဥပဒေတွေဟာ လူကဖြစ်လာတာကြောင့် နောက်ဆုံးလူအများဆန္ဒကိုဘဲ လိုက်ခဲ့ရတာပေါ့။ သိသာသိစေမမြင်စေနှင့်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။
Pye Kun Zaw has written 11 post in this blog.
View all posts by Pye Kun Zaw →	Blog
P chogyi says: ကျေးဇူးတောင်တင်ရဦးမှာ
သန်းထွဋ်ဦး says: အင်းးးးထူးထူးဆန်းဆန်းဗျာ။ကျေးဇူးပါဗျို့ ။
ဆေးလိပ် ဖြတ်လာတာ တစ်နှစ်ကျော်လာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 65
Pye Kun Zaw says: ဆေးလိပ်ဖြတ်တာ တစ်နှစ်ကျော်သွားပြီဆိုတော့ ဝမ်းသာပါတယ်။ သတိရရုံဘဲသတိရပေါ့နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5308
MaMa says: ဖြစ်သင့်တာနဲ့ ဖြစ်ချင်တာကို အဆင်ပြေအောင် ဒွန်တွဲပေးလိုက်တာလေးပေ့ါ။ [:)]
ကြောင်ဝတုတ် says: ဆေးလိပ်ကြိုက်သောသူကလဲ ဆေးလိပ်မသောက်ဘဲနေဖို့ တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့အနေအထားကိုး…
ကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးမှသိတာကိုး… လေယာဉ်ပျံပေါ်မှာ အချိန်အကြာကြီးနေရတဲ့အနေအထားက လူတစ်ယောက်ကို Stress ကို တိုးပွားစေတယ်လို့ကြားဖူပါတယ်…
Stress တိုးလာတာနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်လေ့သောက်ထရှိသူကို သောက်ချင်စိတ်ဖြစ်လာအောင်… ဆွပေးလိုက်သလိုပါပဲ…
အဲဒီအချိန်မှာ ဆေးလိပ်မသောက်ရရင် စိတ်တိုတတ်၊ စိတ်အလိုမကျတတ်တာဖြစ်တတ်လို့… လေယာဉ်ပျော်မှာဆေးလိပ်သောက်ခွင့် ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်…
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် လေယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်နိုင်သလို… ဆေးလိပ်သောက်မှုကြောင့်လဲ လေယာဉ်ပျက်ကျမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်…
အဲဒါကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အန်တီမမပြောသလို အကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းထင်မိပါတယ်…
Comments By Postအဟံ ပထမံ - Ko chogyi - ခရီးသည်ကြီးအတ္တဆန် - N@ng Ghi Ghi Joe Z - ခရီးသည်ကြီးသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်မျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - padonmar - ခရီးသည်ကြီးအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - padonmar - ခရီးသည်ကြီးယုံလား? - ဦးဦးပါလေရာ - အလင်း ဆက်Passport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - ဦးဦးပါလေရာ - ဦးဦးပါလေရာကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - Ko chogyi - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - parlayar 46 - padonmarငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - အလင်း ဆက် - padauk moeမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - အလင်း ဆက် - မောင် ပေကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - အလင်း ဆက် - Ma Maကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - အလင်း ဆက် - TNAမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - padonmar - black chawအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - အလင်း ဆက် - TheWinner Getprizeလူပါး ပုလင်းထိ - Ma Ma - Ma Maမင်းပြုစားနေတဲ့ မုသားစကားလေးတစ်ခွန်း............ - အလင်း ဆက် - padauk moeနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - GaviaGirl - မောင် ပေအညာနွေ ဘယ်ဆီခန်း တောင်ညိုနေကွယ်သမ်း............. - မောင် ပေရာသီပိတ်ပွဲစဉ်များထဲမှ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - အလင်း ဆက်သင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ... - padauk moe - TNAပုသိမ်မြို့ ရေကြည်ဦးရပ်ကွက် ၁၃ လမ်းမှ..... - မောင် ပေစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - မောင် ပေ - Mobile13East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities